तिमी मेरो नलेखिएको प्रेमपत्र |
Posted on December 19, 2009 by Yonepal
उसले सोध्यो, ‘खोइ त मेरो जवाफ ?’ ‘के चिठी नै दिनुपर्छ र ?’ रेखाले भनिन् । उसले त्यही जवाफलाई रेखाको अस्वीकृति मान्यो । भन्यो, ‘त्यसो भए मेरो चिठी फिर्ता देऊ ।’
प्रेमपत्रको शक्तिमाथि अंग्रेजी कवि जोन डोनले भनेका छन्, ‘चुम्बनले भन्दा प्रेमपत्रले दुई आत्मालाई राम्ररी जोड्छ ।’
‘अँ भेटियो,’ उनले भनिन्, ‘तर पत्र पठाउने आत्माले नै मलाई बुझेन त्यो सुरु नहुँदै सकियो ।’
उनी त्यतिबेला विराटचोकको द राइजिङ बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा ७ मा पढ्थिन् । त्यस्तै १३ वर्षकी हुँदी हुन् । रेखा स्कुल जाने र र्फकने समयमा स्कुलनजिकै एउटा केटो बाटो कुथ्र्याे । त्यो केटो अर्काे स्कुलमा कक्षा १० मा पढ्थ्यो । पि्रन्सिपलको छोरा थियो । विस्तारै उनलाई त्यो ‘बाटो कुराइ’ मन पर्न थाल्यो । ‘बाटोमा उसलाई देख्दा म बेलुका रातिसम्म खुसी हुन्थेँ, नदेख्दा के नपुगेजस्तो, मन खल्लो हुने भन्या,’ उनले आँखीभाँै तन्काउँदै भनिन् ।
एक वर्षसम्म यो बाटो कुराइ जारी रह्यो । ‘त्यो बेला असाध्यै रमाइलो लाग्थ्यो । उसको अगाडि देखिँदा म धेरै लजाउँथेँ । म त्यस्तो लजालु केटी होइन नि ! तर त्यस्तो हुँदोरै’छ,’ उनले सुनाइन्, ‘म ऐना पनि बढी हेर्न थालँे । राम्री त थिएँ नै झन् राम्री हुन मन लाग्ने ।’
मन परेको मान्छे अगाडि आफ्नो बेइज्जत कसले देख्न सक्छ र ? एकदिन झन्डै त्यसो भएको । जाडो महिना थियो । त्यसैले चौरमा पढ्थे । गणित विषयको कक्षा । त्यसमा रेखा सबैभन्दा कमजोर । शिक्षकले ‘होमवर्क’ हेर्दै थिए । ठ्याक्कै ‘केटो’ गेटमा आइपुग्यो । ती शिक्षक होमवर्क नगर्नेलाई उभ्याएर कुट्थे । रेखालाई डर लाग्यो- उसको अगाडि कुटिनुपर्‍यो भने ?
‘त्यतिबेला मलाई मरिहाल्न पाएजस्तो भयो । थ्यांक गड ठ्याक्कै ‘बेल’ बज्यो । अनि म बाँचँे ।’
रेखाको एउटा ‘ग्याङ’ थियो । चारजना केटी एक केटासहितको । तिनै चारमध्ये एक केटी साथीमार्फत उसले एक/एक दिन चिठी दियो ।
मक्किएका पानामा ओसिएका हृदयबाट थकित स्मृतिका अधुरा आकृतिस्वरूप मेरा कल्पनाका महल नबने पनि म तिमीलाई मनैदेखि चाहन्छु ।………
यसपछि के थियो उनलाई याद छैन । ‘यो वाक्य म जिन्दगीभर बिर्सन्नँ होला,’ उनले केही सम्झेजस्तो भावमा भनिन् ।
त्यति मन पर्ने ‘केटो’का लागि कस्तो पत्र लेखिन् उनले ?
‘कहाँ पत्र लेख्न सक्नु नि ? प्रमाण दिएर प्रेम गर्न सक्ने हिम्मत हुँदैनथ्यो त्यतिबेला । मौन रहेर स्वीकृति दिएँ,’ उनले बाध्यता सुनाइन् ।
तर विडम्बना ! उनको स्वीकृतिलाई त्यो केटोले बुझेन । ‘मलाई मन नपरेको भए उससँग झगडा गर्थर्ें नि !’ उनले भनिन् । त्यसअघि कयाँै केटासँग बाझिसकेकी थिइन् उनी ।
चार दिनपछि त्यो केटा बाटोमा भेटियो । उसले सोध्यो, ‘खोइ त मेरो जवाफ ?’
‘के चिठी नै दिनुपर्छ र ?’ रेखाले भनिन् ।
उसले त्यही जवाफलाई रेखाको अस्वीकृति मान्यो । भन्यो, ‘त्यसो भए मेरो चिठी फिर्ता देऊ ।’
रेखालाई पश्चात्तापले जीउ सिरिंग भयो । ‘मनको कुरो नबुझ्नेले पनि के प्रेम गरेको ?’ उनी चुपचाप घरतिर लागिन् ।
‘मलाई त्यो चिठीको यति माया थियो । घरमा लुकाउने ठाउँ थिएन । ‘तरकारीबारीमा खनेर लुकाएकी थिएँ । गएँ । झिकँे । अनि त्यसलाई टुक्रा-टुक्रा बनाएर च्याँतँे,’ उनले पे्रमपत्रको अन्त्येष्टि यसरी गरिन् ।
उनी घर पुगिन् । तरकारीबारीमा चिठी लुकाएकी थिइन् । ‘मनमा डर थियो कसैले देख्छ कि ?’ त्यसैले झिकिन् र च्यातिन् ।
‘मैले त्यसको सय टुक्राभन्दा बढी बनाएँ होला । त्यतिबेला मलाई उससँग अनौठो रिस थियो,’ उनले सुनाइन् ।
त्यसपछि त्यो केटो बाटोमा कुरिरहेको भेटिएन । ‘मैले उसलाई त्यसपछि आफ्नो कुरा भनिनँ । उसले पनि दोर्‍याएर सोधेन । हामीमा दुश्मनी बढ्यो । अहिले पि्रन्सिपल भएको छ रे,’ उनको अनुहारमा अनौठो खुसी देखियो, ‘म छविकी भैसकँे । पहिला उसले बुझेको भए । सायद त्यतै हुन्थेँ । नायिका रेखा थापा हराउँथी कि ?’
त्ियो उनलाई आएको पहिलो प्रेमपत्र भने थिएन । त्यसअधि नै धेरै पत्र आइसकेका थिए । उनी ११ वर्षकी थिइन्, पहिलो पत्र आउँदा । पत्र ल्याउने आफ्नै साथी थियो राजन । उसले कतिबेला ?… उनले चिठी खोलिन् । त्यसमा के लेखिएको थियो उनलाई अब याद छैन । प्रेमपत्र पाउँदा ठूली भएजस्तो लागेन उनलाई ?
‘त्यस्तो महसुस गर्नेबेला भइसकेको थिएन,’ उनले मुख खुम्च्याइन् ।
त्यसमाथि पत्र लेख्ने पात्र ‘खलनायक’ थियो गाउँको । ‘ग्याङ बनाएर हिँड्थ्यो । त्यसलाई सम्झँदा त अहिले पनि रिस उठ्छ,’ उनको अनुहारमा आक्रोश देखियो ।
त्यसको रिस उनले चिठी ल्याउने राजनमाथि पोखिन् । ‘हामी सँगै स्कुल जान्थ्याँै । तीन दिनसम्म रिसले एक्लै गएँ,’ रिसले एक्लाउने न हो ।
उनले त्यो ‘खलपात्र’लाई हकारिन् । अब स्कुलमा कुरा फैलियो- ‘उसले त रेखालाई चिठी लेखेछ ।’ पछि थाहा भयो, उसले रेखालाई चिठी पठाएर देखाउने बाजी राखेको रहेछ । बोहनी नै नराम्रो !
‘म त्यतिबेलै ‘पपुलर’ थिएँ । सबै, कहाँ-कहाँबाट मलाई मान्छे हेर्न आउँथे । कसको हिम्मत हुन्थ्यो र मलाई प्रस्ताव गर्ने, त्यो गुन्डाले चाहिँ गर्‍यो,’ उनले भनिन् ।
त्यसलगत्तै चिठीको ओइरो लाग्न थाल्यो रे । ‘सानो-सानो चिटका पत्र त कति आए कति । सब मसँग बोल्न डराउँथे, त्यसले गर्दा सबको हिम्मत बढ्यो नि !’
रिेखाको पाँचजनाको गु्रप थियो राजनसहित । स्कुलनजिकै कम्प्युटर सिकाउने ठाउँ थियो । कम्प्युटर सिकाउने एउटा केटो थियो । उसलाई चारैजना केटी ‘लाइन मार्थे ।’ रेखा आफ्ना उसको नाम जोडेर आफ्ना संगीलाई जिस्काउँथिन् । एक दिन त्यसले रेखालाई गिफ्ट दियो- ‘गिटार’
‘उसले मलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रेम जनायो तर, मैले त्यसको कुनै रेस्पोन्स नै दिइनँ र हामी रमाइलोका लागि मात्र उसलाई जिस्काउँथ्याँै । म त्यस्तो गम्भीर थिइनँ ।’
रिेखालाई आजभोलि पनि पत्र आउँछन् । हेटौँडामा कक्षा ७ मा पढ्दै गरेको एउटा विद्यार्थी फ्यान छ । ऊ चिठीमा लेख्छ- ‘म तिमीलाई ठूलो भएपछि बिहे गर्छु ।’
केटा मात्रै होइन । समलिंगी महिलाले समेत उनलाई चिठी लेख्छन् । तीन/चार वर्षअगाडि रेखाको अनुहारको वर्णन गरेर पत्र हुलाकमार्फत आयो । ‘त्यस्तो वर्णन कुनै कविले पनि गर्न सक्दैन होला । त्यो केटी मेरै उमेरको जस्तो देखिन्थी,’ उनले भनिन् ।
‘एकपटक धरानमा सुटिङ भइरहेको थियो । एउटी केटी आएर उनको ओठमै चुम्ब्ान गरिदिई, मलाई दिनभर कस्तो भयो । म उनीहरूको भावनालाई सम्मान गर्छु । तेस्रोलिंगी, समलिंगी सबैको सम्मान गर्छु । तर, म त स्त्री हुँ नि ! ओठमै केटीले चुम्बन गर्दा कस्तो हुने रहेछ,’ उनले सम्भिmइन् ।
सिक्किमका एक वृद्ध रेखाका जबर्जस्त ‘फ्यान’ छन् । उनीे रेखाका लागि मन्दिर गएर प्रार्थना गर्छन् । यतिसम्म कि घरमै पनि पूजा लगाउँछन् रे ! ‘तिनी ५० वर्षका मात्रै भए मलाई उहिल्यै प्रस्ताव राखिसक्थे । उमेरको भयले मात्रै केही भन्दैनन् । व्यवहार असाध्यै माया गर्ने प्रेमीको जस्तो छ । उनका हरेक एसएमएसमा ‘आई लभ यू’ लेखिएको हुन्छ ।’
रिेखा भन्छिन्, ‘मलाई प्रेमपत्र सयाँैका संख्यामा आए । पत्र आएर खुसी लागेको त्यही एउटा थियो ।’ उनका साथीहरूले पत्र लेख्ने केटाहरूलाई भन्ािदिन्थे, ‘यो त घरबारे होइन । यसको पछि नलाग ।’
उनी भन्छिन्, ‘आजकल मानिस प्रेम गर्दैनन् सौदा गर्छन् । जहाँ बढी फाइदा छ, त्यहाँ कुदिहाल्ने । हाम्रा हजुरआमाहरू मागी-विवाहमा पनि कति खुसी थिए । अहिले प्रेम-विवाह दिनहुँ टुट्छन् । पैसा र पावर भए केटीलाई पुग्छ । केटालाई अनुहार भए हुन्छ ।’
अरूको प्रेमको यस्तो बखान गर्ने रेखा आफ्नै श्रीमान् छविलाई कति माया गर्छिन् ? ‘मैले प्रेम देखाउनै पाएको छैन । हामीले अभाव देख्नुपरेको छैन, दुःख देख्नुपरेको छैन । वास्तवमा मैले मेरो प्रेमको परीक्षा दिन पाएको छैन,’ उनले भनिन् । उनले अरू थपिन्, ‘छवि र मेरोबीचमा प्रेमपत्र नै आदान-प्रदान नभए पनि मनको भाव, चाह र सपनाको साटासाट भने भएको हो । र, भइरहेको पनि छ । त्यसैले ऊ नै मेरो नलेखिएको प्रेमपत्र हो ।’
अरूले दिएका प्रेमपत्रको चाङ लगाउने रेखाले आफँैले कतिलाई प्रेमपत्र लेखिन् नि ? ‘प्रेमपत्र नलेखेर किशोरावस्थामा जो मन पथ्र्याे, उसलाई मैले गुमाएँ । पछि छवि मेरो जीवनमा आयो । ऊ नै मेरा लागि सबथोक भयो,’ उनले भनिन्, ‘तर पनि प्रेमपत्र आदानप्रदान गरेर प्रेम गर्नेहरूप्रति मेरो सम्मान छ, सद्भाव छ ।’
फेरि, यो जुनीमा रेखाले कसैलाई लभलेटर लेख्लिन् कि नलेख्लिन् ! Sourse: Nayapatrika
« हिमालमा हिँउ छैन एक-दुई होइन चौध प्रेमिका »